Top 10 Alternatives ka iTunes 2015 - Wondershare
Top 10 Alternatives maka iTunes nyefee Music si PC ka iPhone / iPad / iPad Obere / iPod
M na-achọgharị na Ịntanetị, achọta na ndị mmadụ na ndị na-achọ uzo ozo ka iTunes nwere dị iche iche na nzube. Ụfọdụ na-atụ anya iTunes uzo ozo na-ngwa ngwa na-ebufe music ka Apple ngwaọrụ. Ụfọdụ chọrọ maka onye kensinammuo iTunes ọzọ jikwaa music na nkiri ọba akwụkwọ. Iji nyere aka ka mkpebi a, m na kpuchie ma transfer ngwá ọrụ uzo ozo ka iTunes na Media ọkpụkpọ uzo ozo ka iTunes na isiokwu a:
Part 1: Top 10 Best iTunes Alternatives
Part 2: Top 10 iTunes Alternatives Play Music na ala
Part 3: ndị na-ekwu iTunes bụ ahihia, Gịnị Ka I Chere?
1.Super Powerfull iTunes Alternative
Ihe niile na-na-otu music management omume, na-eme gị music na-enye ohere ọrụ nyefee, download, ndekọ, ọkụ na hazie gị music na listi ọkpụkpọ.
• Nyefee music n'etiti ọ bụla na ngwaọrụ (iOS, Android, Win na Mac).
• Jiri iTunes na akporo ekwentị.
• Download video ma ọ bụ music si YouTube / ndị ọzọ 1000+ iyi online saịtị.
• Downlaod music si wuru na-top listi ọkpụkpọ.
• Record ọ bụla song ma ọ bụ playlist ị na-ahụ na weebụ.
• Na akpaghị aka nyochaa na idozi music mkpado, mkpuchite na ihichapụ duplicates.
• zuru okè ndabere / weghachi iTunes n'ọbá akwụkwọ.
• Jikwaa music enweghị iTunes mgbochi.
• Mepụta onwe gị omenala mixtape CD mfe!
• Professional music ọkpụkpọ / music nkekọrịta ngwá ọrụ.
Nyefee ọ bụla na kọmputa ọ bụla iDevice
TunesGo-eme ka ọ n'ihi na ọrụ nyefee ọ bụla song ọ bụla na kọmputa ọ bụla iPhone, iPad, & iPod, na-agbasa erughị eru nke iTunes 'n'ihi na-ekere òkè songs n'etiti kọmputa na ngwaọrụ.
Nkwado Songs na vidiyo na 30+ Dị Iche Iche Formats
TunesGo akwado music na vidiyo na ihe karịrị 30 formats, na-enyere ndị ọrụ na-nyefee fọrọ nke nta ọ bụla na-egbu egbu song ma ọ bụ video ọ bụla na kọmputa ọ bụla iPhone, iPad, na iPod na obi ụtọ.
Abụọ-Ụzọ Ngakọrịta - A Complete Ngwọta
iTunes bụ otu ụzọ na-mmekọrịta ngwá ọrụ: site na kọmputa na-ngwaọrụ. Wondershare TunesGo enye abụọ na-ụzọ mmekọrịta: site na kọmputa na-ngwaọrụ & site na ngwaọrụ ka kọmputa.
Nyefee Music Back n'ime iTunes Library
Nyefee music na listi ọkpụkpọ site na ọ bụla iPhone, iPod, na iPad azụ n'ime ihe iTunes Library. Iyo si oyiri songs na ugbua adị ke iTunes, eke a ezigbo ahụmahụ na a mara mma, haziri n'ọbá akwụkwọ.
2. CopyTrans Manager - A Mfe iTunes Alternative
CopyTrans Manager a maara dị ka a free iTunes ọzọ jikwaa faịlụ na iPhone, iPod, na iPad. Ọ na-ekwe ka ndị ọrụ na tinye music, videos, ngwa ọdịnala, wdg si a PC na iPhone enweghị iTunes. Site n'ime nke a, ọrụ ike nyefee music site na kọmputa ka otutu iPhones, iPods, na iPads enweghị erasing mbụ data na ngwaọrụ. Otú ọ dị, ọ bụ nanị maka Windows PC. Ọ dịghị Mac version dị ma. Ọ bụrụ na ị na-achọ ka onye ọzọ na iTunes maka Mac OS X, ị ga-agbalị CopyTrans ọzọ maka Mac.
• Categories dị ka Artist, Album wdg
• Ọ bụ free na-adịghị mkpa ị na-eji iTunes
• Ndi nyefee .wma
• Ndi ịchọpụta music na-akpaghị aka mgbe ngwaọrụ na-plugged na
Ahịa: Free akwado os: Windows 7, 8, Vista na XP.
3. SynciOS - A Free iTunes Alternative
SynciOS, a free ọzọ ka iTunes, awade nkịtị ọrụ na ọrụ dị mkpa ka mmekọrịta music, videos, foto, wdg si a PC ka iPhone, iPod, na iPad. N'oge usoro nke importing songs na vidiyo na ngwaọrụ, ọ ga-tọghata kedi faịlụ ka iDevice enyi na enyi formats. Ọ na-ekwe ka ndị ọrụ na nkwado ndabere na mpaghara mgbasa ozi faịlụ, dị ka songs, foto, na vidiyo si na iPhone, iPad, na iPod ka PC. Ọ bụ ezigbo ngwá ọrụ ma e wezụga ya enweghị ike mbupụ music ozugbo na iTunes Library. Ọzọkwa, ọ na-arụ ọrụ na Windows PC.
• Ọ dịla syncing ikike.
• Fast media nyefe.
• enye ozi ndị ọzọ na ejikọrọ ngwaọrụ, si otú ịdọ aka ná ntị na ị bụrụ na nke nsogbu ọ bụla na ngwaọrụ.
• Back elu data nhọrọ.
• Nwere nke na ijikwa kọntaktị
Ahịa: Free ($ 39.95 maka Pro version) akwado os: Windows 7, 8, Vista na XP
Gbalịa SynciOS >>
MediaMonkey bụ a media ijikwa ngwá ọrụ na-atụ aro okachamara ebe ọ nwere ihe karịrị a dị mfe media ijikwa arụmọrụ. N'ihi na otu onye, ​​ọ bụ n'etiti ole na ole media management ngwa na nwere ike Chọpụta efu track ọmụma ma jupụta na ntipú n'ihi na ị na-akpaghị aka.
• Sikwuo niile mgbasa ozi faịlụ n'ihi na ị na mfe ịnyagharịa site na ha.
• Learns ị na-ege ntị àgwà na-ewuli a playlist maka gị.
• nwere ike Chọpụta efu track ọmụma.
• Ọ nwere mgbagwoju anya interface na-pụtara n'ihi na Gurus.
Ahịa: $24.95 akwado os: Ma Windows na Mac OS
Gbalịa MediaMonkey >>
5. Kwesịrị Ntụkwasị Obi
N'adịghị ka ọtụtụ media oru, Fidelia nwere ike tinye n'ọrụ commercially esighịkwa eziokwu na o nwere ezi wavelength tụụrụ ime, a na-akpata na bụ ukwuu ọdabara na music nka. Fidelia akwado a ìgwè ndị ọdịyo na video formats ugbu a na ọ na-eji Izatope technology na adị conversions.
• kensinammuo interface bụ mfe ịnyagharịa site.
• Easy Personalization maka interface na ọdịyo playbacks.
• Headphone virtualization ike kpọpụta eke ụda.
• akwado elu àgwà formats dị ka FLAC nke iTunes adịghị akwado.
• nanị maka Mac ngwaọrụ.
Ahịa: $29.99 akwado os: Mac OS naanị
Gbalịa Fidelia >>
Họrọ iTunes Alternative Software na nke ahụ bụ Right maka Ị
Lelee ọzọ iTunes uzo ozo >>
Copy music, listi ọkpụkpọ, videos, iTunes U, Pọdkastị si iTunes / na kọmputa na-iPhone / iPod / iPad.
Nyefee na music, listi ọkpụkpọ (smart listi ọkpụkpọ gụnyere), videos, iTunes U, Pọdkastị si iPhone / iPod / iPad ka iTunes / kọmputa.
Hazie music n'ọbá akwụkwọ site gwara music mkpado, na-agbakwunye music mkpuchite, ihichapụ oyiri songs na na.
Download video / song ma ọ bụ playlist si online saịtị. Dị ka YouTube, Spotify, SoundCloud, Vevo, MTV, Vimeo na na.
Awade ọtụtụ nde songs na vidiyo na ibudata.
Record ọ bụla song si iyi online saịtị
Mfe tọghata ọdịyo faịlụ na vidiyo na iPhone, iPod, iPad enyi na enyi usoro.
Ndabere / weghachi iTunes n'ọbá akwụkwọ.
iTunes egwuregwu na-ahapụ ọrụ ịkọrọ songs on na kọmputa na iDevices.
Ọkụ music ka CD.
Nye nkwanye music ndebanye aha
Share na play music n'etiti kọmputa na mpaghara gị na netwọk.
Si n'elu table, ị pụrụ ịhụ na Wondershare TunesGo bụ a keukwu iTunes nnọchi na a mma music Ọhazi karịa iTunes. Jiri ya tụnyere ndị ọzọ na ngwaọrụ, Wondershare TunesGo enye ihe ike na o nwere iche iche version maka ma Windows PC na Mac.
MusicBee bụ otu n'ime nnukwu asọmpi na-iTunes, ọ na-agụnye ihe interface yiri ka nke iTunes naanị na ọ nwere mmezi ọrụ dị ka DVD / CD ripping na akpaaka DJ nzi playlist Onye Okike atụmatụ. Na mgbakwunye na, MusicBee-enye gị ohere tinye anya mmetụta mgbe mmeghe mgbasa ozi faịlụ.
• Ọ dịla a mma interface.
• Pụrụ dọwara faịlụ site na CD si.
• Ọ dịla onye na akpaaka DJ atụmatụ maka eke listi ọkpụkpọ mfe.
• Ndi bịa na-inbuilt encoder ma na ị nwere ibudata ya iche iche.
Ahịa: Free akwado os: Windows
Gbalịa MusicBee >>
PodTrans rụrụ ọma na-ebufe akụkụ, ihe ma ọ bụ obere ka iTunes mmekọrịta. Ọ Nyefe songs site na kọmputa na-iPhone, iPod, ma ọ bụ iPad enweghị iTunes. Dị ka ndị ọzọ iTunes ọzọ software, mgbe na-enyefe faịlụ, ọ dịghị mbụ faịlụ na ngwaọrụ a ga-ehichapu ya. Ọzọkwa, PodTrans ike ịnyefe songs, videos, Podcast, olu memos, wdg site na iPhone, iPod, ma ọ bụ iPad ka PC maka ndabere.
• nnọọ ngwa ngwa na searches.
• ike ịnyefe faịlụ site na iPods ka iPhones.
• Ike tọghata audio formats.
Ahịa: Free ($ 29.95 iji kwalite ka Pro version) akwado os: Windows 7, 8, Vista na XP & Mac OS X 10.6, 10.7, 10,8, 10,9
Gbalịa PodTrans >>
A na ngwa nwere oké interface na ike na-akpaghị aka ịchọpụta dị airplay ọdụ ụgbọ mmiri. Navigation site na usoro ihe omume dị mfe, na Ọ nwere ihe ID3 mkpado edezi ikike.
• Ọ nwere ike ijikwa nnukwu mpịakọta nke mgbasa ozi faịlụ.
• Fast searches.
• Ọ na-adịghị kegide iTunes n'ụzọ ọ bụla si otú n'ụzọ zuru ezu arụmọrụ, na-enweghị ọ bụla mpụga nkwụnye ins downloads.
• A nnọọ iferi interface.
Ahịa: $ 19.95 akwado os: Mac OS X
Gbalịa Swinsian >>
Nke a bụ ihe dị mfe na ngwá ọrụ mmekọrịta gị niile media faịlụ na nnọọ a okwu nke a ole na ole clicks. Ọ nwere ihe magburu onwe interface na ọbụna nwere òkè atụmatụ maka ọrụ ịkọrọ ha media faịlụ na ndị ọrụ ndị ọzọ.
• Ọ dịla onye kensinammuo interface.
• Ịkekọrịta atụmatụ.
• Pụrụ mmekọrịta faịlụ site na ndị ọzọ mpụga ngwaọrụ.
• Ọ dịla hitches na Mac OS ngwaọrụ.
Ahịa: Free akwado os: Windows, Android, na Mac
Gbalịa DoubleTwist >>
Ọzọ ọzọ ka iTunes, AnyTrans ike ịnyefe ụdị ọ bụla nke music ọba akwụkwọ, ngwa, ndị ọzọ media faịlụ wdg Ọ bụ ihe dị mfe iji ngwa na nwere ikike iji weghachi ma wughachi music ọba akwụkwọ mgbe àjà mfe na magburu onwe Njikọta na a dịgasị iche iche nke ngwaọrụ.
• Best maka iOS na-ebufe faịlụ site na otu iDevice ndị ọzọ iDevice.
• nwere ike iweghachi data ọbụna site ná ndị iTunes ndabere.
• tọghata media faịlụ formats dị ka mkpa.
• nwere ike igwu iTunes listi ọkpụkpọ site na ochie iPods.
• Enye ohere e kere eke nke music n'ọbá akwụkwọ.
Ahịa: $39.99 akwado os: Windows, Max, na iOS
Gbalịa AnyTrans >>
Nkebi nke 2: iTunes Alternatives Play Music na ala
Ọ bụ ihe pụrụ iche na ọkpụkpọ maka iOS ngwaọrụ na zaa nnọchi nke iTunes. Ọ bụ dakọtara na niile iOS ngwaọrụ dị ka iPhone, iPad, Android, na ọbụna Windows ekwentị na mbadamba.
• akwado audio formats: MP3, MP4, AAC, CD Audio, WMA, Vorbis, Opus, FLAC, WavPack, WAV, AIFF, Musepack, Speex, AU, SND ... na ndị ọzọ na ndị ọzọ components.
• Easily customizable ọrụ interface okirikiri nhọrọ ukwuu.
• Advanced geo ike.
• Nkwado maka ripping Audio CD nakwa dị ka transcoding niile na-akwado audio formats na iji Ntụgharị akụrụngwa.
• Customizable keyboard Ụzọ mkpirisi.
• Open akụrụngwa ije ikwe-atọ ndị ọzọ mmepe ịgbatị arụmọrụ nke ọkpụkpọ.
Ahịa: Free akwado os: iOS na Windows
Gbalịa Foobar2000 >>
Ecoute e wuru eji ndabara music ngwa isi na otú ọ na-akwado ihe niile, ka ihe atụ, hara, iTunes egwuregwu, na Sound Lelee wdg Ọ na-eme ka ọ dị mfe ịchịkwa gị music n'ọbá akwụkwọ na-ahapụ gị ngwa ngwa ịkpọgharịa ma ọ bụ na-egwu ma na-ele ihe ndị dị ka ndị omenkà, genre, na andiwet wdg
• N'adịghị ka ndị ọzọ music software maka iOS, ọ nwere ike enuba songs na-ma na-ibudatara iTunes egwuregwu
• Pụrụ iche mmegharị ofụri ngwa
• Ndenye navigation nke music n'ọbá akwụkwọ
• adịghị nwere playlist management
Ahịa: Free akwado os: Mac, iOS
Gbalịa Ecoute >>
Otu n'ime n'elu music oke ime ụlọ na onye ọzọ na iTunes, MediaMonkey-enye ihe na-akpali akpali ngwugwu wee na-eme ọrụ nke ọma. Ọ bụ a ngwa ngwa software na nwere kensinammuo ọrụ interface na-eme ka ọ dị otú ahụ a kụrụ na onye ọ bụla na-achọ a credible iTunes ọzọ.
• Ahazie gị music collection.
• ahapụ gị idozi faịlụ.
• Text-arọ interface
Ahịa: Free na site na $24.95 maka Gold version akwado os: Windows, Linux, iOS, na Android
4. Kwesịrị Ntụkwasị Obi
Ndị chọrọ ndị kasị mma music na-egwuri ga n'ụzọ dị mfe ịhụ Fidelia dị ka oké iTunes ọzọ ọkpụkpọ dị ka ọ na-enye ohere maka ndị kasị mma Nchikota Right Now agwa na audio ikwesị ntụkwasị obi, n'emebighị ọdịyo waveform mgbe niile.
• Import music si gị iTunes Library.
•-enye elu-ikwesị ntụkwasị obi ụda maka ọkaibe music ndị hụrụ.
• Kwado a dịgasị iche iche nke elu-edu audio formats, dị ka FLAC.
• Ngosipụta track mkpado, artwork, stereo etoju, na ọdịyo waveforms.
• tọghata ọdịyo faịlụ ka họọrọ formats mgbe importing ka n'ọbá akwụkwọ.
•-arụ ọrụ nanị na Mac ngwaọrụ.
Ahịa: $29.99 akwado os: OS X 10,11 El Capitan
Dị ka Fidelia, Vox nwekwara ihe ọzọ oké mgbasa ozi ọkpụkpọ na-arụ ọrụ nke na-iTunes ọzọ nke ọma. Ọ na-enye enweghị nkebi na mfe mwekota na SoundCloud, na Last.fm scrobbling enweghị ihe ọ bụla okwu. Ị ga na-akpọ HQ tracks on Vox ọtụtụ ugboro karịa ihe ọ bụla ọzọ dị ka Vox hụrụ elu-ikwesị ntụkwasị obi na-ada.
• yiri ọkụ aj u si gị music n'elu iTunes.
• Easy, unobtrusive interface.
• Ịhazi albums na "ndekọ ụlọ ahịa" ejiji bụ ekwe omume.
Gbalịa Vox >>
Tomahawk nwere ike mmekọrịta gị niile online akaụntụ tinyere gị Obodo collections n'ime otu otu, streamlined ngwa. Ọ bụ dakọtara na online ego dị ka SoundCloud, Last.fm, Spotify, Grooveshark wdg Ozugbo gị niile na isi mmalite e synced, Tomahawk ga sere kasị mma version nke song na ị chọrọ igwu niile isi mmalite.
• nakọtara music obodo na online music ke kiet ke otu Central isi.
• Station na playlist e kere eke.
• Social na-ege ntị atụmatụ.
• Amateur cover songs sinik n'ime mix.
• Ụfọdụ ọrụ nwere ike ịhụ ya anya.
• Enwereghị Njikọta ka amasị nke Pandora na Slacker.
Ahịa: $ 10 akwado os: Windows, Mac, na Linux
Gbalịa Tomahawk >>
Onye a bụ ihe OS X ngwa na-ahapụ gị na-ele gị iTunes n'ọbá akwụkwọ site album ekpuchi na ihe-elekwasị anya na visual okirikiri nhọrọ ukwuu. Sonora atụmatụ a streamlined-eji ire ụtọ okirikiri nhọrọ ukwuu na-enye ohere maka eme nchọgharị na ekpe n'akụkụ aka na-egosiputa kwụ n'ahịrị na ala.
• Easy iji.
•-akwado ọtụtụ formats.
• Ike ịmepụta listi ọkpụkpọ.
Ahịa: $9.99 maka zuru version akwado os: Mac
Gbalịa Sonora >>
Vinyls bụ ihe OS X ngwa kwa, dị nnọọ ka Sonora, Otú ọ dị, ihe ọ na-eme bụ dịtụ iche; bu, na mimic a vinyl n'ọbá akwụkwọ na gị iTunes dijitalụ n'ọbá akwụkwọ. Ọ nwekwara ike idozi anyị music n'ụzọ dị irè site Artists, Albums, Ndetuta egwu ọkpụkpọ, ma ọ bụ Pọdkastị wdg The ngwa nwekwara lays pụrụ iche na-elekwasị anya album nkà.
• Enyele album cover nchọgharị.
• amama gị niile album artwork n'ime 12-anụ ọhịa kpọrọ.
• Ochie na-eche ndị niile music.
• Ya imewe na atụmatụ ndị enwetara enweta uto.
Ahịa: 20-n'efu ụbọchị ikpe na mgbe nke ahụ gasịrị $14.99 akwado os: Mac OS X 10.6.7 na n'elu
Gbalịa Vinyls >>
Ọ nọwo na afọ 18 ma ọ bụ otú ebe Winamp akpa ẹkenam ka music ndị hụrụ nke ụwa na ọ ka na-aga ike. Na ya ọtụtụ plugins na jazzy visualizations, Winamp ka n'aka ẹkenịmde ya megide ọtụtụ ọhụrụ media Player na bụ otu n'ime ihe ndị kasị pụrụ ịdabere na iTunes uzo ozo rue ụbọchị.
• Free MP3 download.
• Mfe iji interface.
• Music mmekọrịta na PC ma ọ bụ Mac.
• iTunes mbubata.
• Hụrụ n'Anya n'Anya batrị.
• dere anya.
Ahịa: Free, $4.99 maka Pro version akwado os: Mac, Windows, Android, na iOS
Gbalịa Winamp >>
A free software, Enqueue echetara anyị a dị mfe iTunes na o sina bụ oké music ọkpụkpọ kwa. Ọ bụ otu nke kasị mma egwuregwu maka onye na-achọ ezi, ọ dịghị ihe efu, na ọtọ music ọkpụkpọ. Ọ bụ ngwa ngwa, dị ọcha, na-ahapụ gị mbubata gị iTunes n'ọbá akwụkwọ dị ka mma.
• Dọrọ na dobe songs na iji ị chọrọ igwu ha.
• akwado geo na playback maka ọtụtụ formats gụnyere mp3, mp4, AAC, ogg, FLAC, WAV, aiff, musepack na ndị ọzọ.
• nanị maka Mac.
• Oke larịị ka tụnyere ya mpi.
Ahịa: Free akwado os: OS X 10.6 ma ọ bụ mgbe e mesịrị
Nkebi nke 3: ndị na-ekwu iTunes bụ ahihia, Gịnị Ka I Chere?
Infographic: Nọrọ n'ebe iTunes 12! ma ọ bụ ma eleghị anya, dị nnọọ enye ya a ohere
> Resource> iTunes> Top 10 Alternatives maka iTunes nyefee Music si PC ka iPhone / iPad / iPod